Xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League oo tijaabada caafimaad u maraya kooxda Paris St Germain – Gool FM
Xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League oo tijaabada caafimaad u maraya kooxda Paris St Germain
Haaruun July 29, 2019
(Paris) 29 Luulyo 2019. Sida wararku ay sheegayaan xiddigan ka ciyaara horyaalka xiisaha leh ee English Premier League ayaa tijaabada caafimaad u maraya naadiga Paris St Germain.
Warsidaha PA ayaa fahamsan in laacibka khadka dhexe ee Everton, Idrissa Gueye uu baaritaanka caafimaad ugu marayo kooxda PSG ee Waddanka Faransiiska, maalmaha soo socda.
PSG ayaa qarka u saaran inay ku dhawaaqdo saxiixa ciyaaryahankan, kaasoo laga diiday dalabyo ay ka soo gubdiyeen laacibkan bishii Janaayo ee horraantii sanadkan.
29-sano jirkaan xulka qaranka Senegal ayaa ku biiray kooxda Everton sanadkii 2016-kii, kaddib xilli ciyaareed uu ku qaatay Aston Villa, isagoo markaas ka horna u soo ciyaaray kooxda Lille.
Waxa uu kooxda Toffees u saftay 99 kulan oo horyaalka Premier League ah waxaana uu u dhaliyey saddex gool.
Tababaraha kooxda Everton ee Marco Silva ayaa isagoo ka hadlayey Gueye u sheegay Liverpool Echo: “Dabcan, ma garanayno waxa dhici doona ee ku aaddan Gueye, waxaana jira warar badan oo la isla dhexmarayo, laakiin aan aragno waxa dhici doona maalmaya yar ee soo aaddan.”
“Innagu koox ahaan, waxaan rajaynaynaa inaan sii haysanno isaga, dhab ahaan waxa uu inoo yahay ciyaaryahan muhiim ah, laakiin suuqa waa uu furan yahay, sidoo kale waxaan isku dayeynaa inaan iska iibinno qaar ka mid ah ciyaartoydeenna, qaar ka mid ah kooxaha ayaana xiiseynaya xiddigaheenna.”
Wararka laga helayo gudaha dalka Faransiiskana waxa ay sheegayaan in Gueye uu maalmaha soo aaddan tijaabada caafimaad u mari doono kooxda haysata horyaalka Ligue 1 ee PSG.
Ma ogtahay in xulkeenna Soomaaliya uu ka qeyb galayo isreeb-reebka koobka adduunka 2022-ka... (Yuu la ciyaarayaa?)